Sat, Jul 11, 2020 at 3:23pm
बिरामी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को स्वास्थ्यमा सुधार, के दिए चिकित्सकले सुझाव ?
काठमाडौँ, ८ माघ : भाइरल ज्वरोबाट बिरामी पर्नुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । ज्वरोबाट प्रभावित भएपछि अध्यक्ष दाहालले मंगलबार ललितपुरको धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुभएको थियो । यसैबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुमेरु अस्पताल पुगी अध्यक्ष दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको थियो । चिकित्सकले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई दुई/तीन..
प्रचण्डको परिवारमा भाइरल ज्वरो, पत्नी सीता र बुहारी बिना अस्पताल भर्ना
काठमाडौं, ८ माघ स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि खानेपानी मन्त्री तथा प्रचण्ड बुहारी बिना मगर अस्पताल भर्ना भएकी छन् । केही दिनदेखि रुघा खोकीले ग्रस्त बिनालाई ज्वरो आएपछि सोमबार अस्पताल भर्ना गरिएको प्रचण्ड परिवारका चिकित्सक प्राध्यापक डा. युवराज शर्माले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगर स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना भएकीछिन् । भाइरल ज्वरोका कारण मन्त्री मगर ललितपुरको धापाखेलस्थित..
डा. गोविन्द केसीलाई वार्डमा सारियो, भने - आइसीयूमा बेड अभाव नहोस्
काठमाडौं, ६ माघ : डाक्टर गोविन्द केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियूबाट वार्डमा सारिएको छ । इलामबाट काठमाडौँ ल्याए लगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आइसियूमा उपचाररत उनलाई आइतबार वार्डमा सारिएको हो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले उनको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा रहेको बताउँदा बताउँदै पनि केसीकै आग्रहमा आइसियू बेडको अभाव नहोस् भन्दै बेडमा सर्न लागेका हुन् । उनले आइसियू बेडको अभावमा सर्वसाधारलाई उपचार गर्न समस्या नपरोस..
Results 1445: You are at page 31 of 49